Shiinaha Waxyaabo adag oo toosan bambo soosaarka waji soosaarka iyo Warshad | Bamboo Dahab ah
Bamboo waa shey aad u adkaysi u leh daboolka wajiga. Looxyada gogosha bamboo waa wanaagsan yihiin waxayna leeyihiin muuqaal qurux badan. REBO® guddi gogosha gogosha bamboo waxay sameysay dab-damis Class C ah, taasoo macnaheedu yahay in guddiga uusan sahlaneyn inuu dab qabsado. Faa'iidooyin dhowr ah ayaa laga helaa qalabka gogosha bamboo:
Qoryaha Bamboo ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa dhismaha iyo gudaha, waxaana loo qaybiyaa bamboo gudaha ah iyo bamboo dibedda ah iyadoo la raacayo goobta ugu badan ee laga codsado. Marka loo eego meesha ay ku taallo, waxaa badanaa loo isticmaalaa darbiyada derbiyada, sagxadaha iyo saqafyada la laalay. Dhumucda ugu weyn ee sabuuradda waa 12mm iyo 18mm. Gudiga darbiga culus ee bamboo waa alaab ay samaysay daaweyn dusha sare oo gaar ah iyadoo lagu saleynayo banaanka loox culus.
Goynta gidaarka bamboo waa alaab dheeri ah oo laga soo dhejiyay bamboo dun leh, oo leh astaamo dhammaystiran oo ku saabsan, taas oo ah cufnaan sare, xoog badan, adkaansho aad u daran, soo saarid rasmi ah oo caadi ah (E1 heerka Yurub). Gudiga darbiga Bamboo waxay leeyihiin yaraansho yar oo qallalan iyo xaddiga barar, ma fududa in la qaabeeyo, ka hortagga daxalka, biyuhu iyo iska caabbinta cimilada. Waxay leedahay xasillooni adag, waxayna ka gudubtay tijaabada karinta ee 72-saac. Waxaa si weyn loogu isticmaalaa qurxinta derbiga ee villa, hoteelada iyo naadiyada. Gudiga darbiga culus ee bamboo ayaa sidoo kale caan ku ah qurxinta jardiinada gaarka loo leeyahay, dartiis bey'ada u fiican, sifooyinka caafimaadka leh.
1) Muuqaalka dabiiciga ah ee quruxda badan
2) Aad u adkeysi badan, xasiloon oo xoogan
3) Dabka u adkaysta (Fasalka B)
4) Very toosan oo muddo dheer soconaya
Hore: Gogosha bannaanka ee adag oo cufan leh
Bamboo Fududeynta Fududeynta Fudud
Baasaboor adag oo cufan leh oo bannaanka u ...
Cadaadis kulul oo tayo sare leh oo bamboo culus oo dibedda ah ...
E1 Eurpean heerka baasaboorka eco-saaxiibtinimo ...
Midab madow oo aan lahayn sabuuradda bamboo qaloocsan
Easy rakibaadda dunta baasaboorka u leh tolmo wanaagsan f ...